के विवाह गर्नैपर्छ ? - Pabil News
Today: April 24, 2019
धादिङमा भूकम्पपछि ४२ हजार ५ सय ३० घर बने
श्रीलङ्का आक्रमणः ज्यान गुमाउनेको संख्या ३५९ पुग्यो
धादिङबेसीमा अपांगता भएकाहरुलाई कम्प्यूटर तालिम सुरु
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन प्रस्थान
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली ३८ प्रतिशतले घट्यो
चेन्नइद्धारा हैदराबाद ६ विकेटले पराजित
के विवाह गर्नैपर्छ ?
| Categorized As विविध | With 1 Comment | 202 Views
‘अहो, बिहे गर्ने बेला भएन र ?’ उमेर चढ्दै गएपछि अक्सर युवायुवतीले झेल्ने प्रश्न हो यो । यसको स्पष्ट आशय के बुझिन्छ भने, निश्चित उमेर भएपछि विवाह गर्नैपर्छ ।
विवाह एक सामाजिक परम्परा हो । त्यसैले विवाहले सामाजिक मूल्य र मान्यता राख्छ । हामीकहाँ के सोचाई छ भने, जिन्दगी चलाउन विवाह गर्नुपर्छ । विवाहपछि जब एक पुरुष र महिला एकाकार हुन्छन्, उनीहरु दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गर्छन् । दाम्पत्य जीवनपछि नै कुनै पुरुष र महिला खुला रुपमा एकाकार हुन पाउने मान्यता छ । उनीहरुले आफ्नै घरबार सुरु गर्छन् । बालबच्चा जन्माउँछन् । एक हिसाबले यो सृष्टिको निरन्तरता पनि हो । हरेकजसो समुदायको आ-आफ्नै विवाह संस्कार छ ।
अर्कोतिर हामी व्रम्हाचार्यको पनि कुरा गर्छौं । यो भनेको विवाह तथा कुनैपनि किसिमको मैथुन क्रियाबाट पूर्णत अलग गरेर रहने जीवनशैली हो । त्यसैले विवाह गर्नैपर्छ भन्ने धारणमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
विवाह नगर्दा के हुन्छ ? यो प्रश्न पनि अस्वभाविक छैन । विवाह गर्नु र नगर्नु कुनैपनि व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत रोजाई हुन् । उनको जन्मजात अधिकार हो । त्यसैले विवाहको सन्दर्भमा समाजभित्र अनेक मतभेत देखिन्छ ।
विवाह प्रतिको हाम्रो धारणा फरक हुनुमा हाम्रो धर्म,संस्कृति तथा लालनपालनले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ ।
त्यसैले, त विवाह सम्बन्धी हाम्रो धारणामा पहिले र अहिलेमा आकास-जमिन बीचको फरक छ । यद्यपी, धेरै व्यक्तिहरु अहिले पनि विवाहलाई कानुनी, सामाजिक र धार्मिक मान्यतासित जोडेर हेर्छन् ।
उनीहरु सोच्छन्, धार्मिक मान्यता अनुसार दुई व्यक्ति एउटा बन्धनमा बाधिनु नै विवाह हो । जसमा दुई व्यक्ति शारीरीक , मानसिक तथा भावनात्मक रुपले एक अर्काप्रति समाहित हुने गर्छन् । उनीह बीच एक आपसमा सहमति हुने गर्छ । जसले उनीहरुलाई जीवनभर एकअर्काप्रति समर्पित भएर बाच्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
२०७५ फागुन १ गते प्रकाशित
के विवाह गर्नैपर्छ ? – Dhading Serofero says:
[…] post के विवाह गर्नैपर्छ ? appeared first on Pabil […]
धादिङ केन्द्रविन्दु भएर ५.२ रेक्टरको भूकम्प
होटल जीविका एण्ड हुक्काबारलाई वेटर आवश्यकता
नेकपा धादिङको अध्यक्षमा भूमि त्रिपाठी, सचिवमा शालिकराम जम्कट्टेल
देशभर मौसम बदली, साँझपख हुरीबताससहित पानी पर्ने सम्भावना
इन्डियन प्रिमियर लिगमा बेंग्लोरसँग चेन्नइ एक रनले पराजित